भीडभाडसँगै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सकस, जोखिम बढ्यो - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७७ साउन १० गते ६:४०
काठमाडौं, १० साउन । लकडाउन हटेसँगै देशभर भीडभाड बढेको छ । भीडभाड बढेसँगै कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकस हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको चिकित्सकले बताएका छन् ।
कोरोना संक्रमितको संख्या १८ हजार नाघे पनि संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुस्त गतिमा गरिएकाले जोखिम अत्यधिक बढेको हो ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले थप चुनौती देखिएको बताए । उनले भने, ‘अब स्वयं व्यक्ति सचेत हुन जरुरी छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा चढेकाहरू सबैको परिचय खुलेको पनि हुँदैन । हिँडडुल गर्दा मास्कको समुचित प्रयोग गर्नैपर्छ । यस्तै, साबुनपानीले हात धुने र हातले मुखनाक आँखा छुनुहुँदैन ।’
जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले जोखिम कम गर्न जनस्वास्थ्य मापदण्डअनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीसाधनमा चढेका यात्रुहरूको रेकर्ड राख्ने प्रणाली छैन । कसैले कसैलाई चिनेको पनि हुँदैन त्यसैले पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा समस्या देखिन्छ । जसका कारण जोखिम बढ्न सक्छ ।’
शुक्रबार नेपालमा थप १ सय ३३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । ३ हजार ९ सय ८७ जनाको परीक्षण गर्दा १ सय ३३ जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । प्रति १० लाखमा ११ हजार ४ सय ९० जनाको कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या ४ सय ८ पुगेको छ । काठमाडौंमा २ सय ७६, ललितपुरमा ८१ र भक्तपुरमा ५१ जनामा संक्रमण देखिएको हो । संक्रमितमध्ये अधिकांश लक्षणविहीन रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म देशभर १८ हजार ३ सय ७४ जनामा संक्रमण देखिएको छ । ३ लाख ३५ हजार दुई जनाको आरटी–पिसिआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ । देशभर १९ हजार ४ सय ४४ जना क्वारेन्टिनमा छन् ।
संक्रमितमध्ये १२ हजार ९ सय ४७ जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ हजार ३ सय ८३ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये ४४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
वीरगन्जमा थप एक संक्रमितको मृत्यु भएको हो । नारायणी अस्पतालको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचाररत वीरगन्ज ११, श्रीपुर रसीघाटकी ८५ वर्षीया महिलाको शुक्रबार मृत्यु भएको हो । उनी मुटु रोगबाट पीडित थिइन् । प्रशान्त वलीले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।